Monday 23rd of October 2017, 7:11:18 pm
१० बर्ष बिदेशमा पसिना बगाएर कमाएको सारा सम्पति लिएर श्रीमती अर्कै संग हिडेपछि ..
Monday 25th of September 2017, 12:51 PM
आजभोली नेपालमा श्रीमान बिदेशमा गएको मौका छोपी परपुरुषसग बहकिने युवतीहरु प्रशस्तै भेटिने गरेका छन् । त्यसरी नै श्रीमानको पसिना खाएर अर्कै शीत फरार हुने यो महिलालाई खोजतलास गरेर सयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । आफ्नो परिवारको खुशिको लागि आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो जन्मभुमी छाडेर बिदेसिन्छ एउटा पुरुष तर सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाइ बनाएको जीवन साथिले बिश्वास घात गरेपछी कस्को मन नरोला र? हो यस्तै भएको छ तनहुँ भिमाद बस्ने एक परिवारमा पनि,...
छात्रालाई दलित केटासँग भाग्न सहयोग गरेको आरोपमा शिक्षकको घरमा आगजनी
Monday 25th of September 2017, 11:22 AM
बैतडी, असोज ९ – बैतडीको शिवनाथ गाँउपालिका–६ कनालीका करण रानाको घरमा नचिनेका व्यक्तिले आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । करण स्थानीय विद्यालयका शिक्षक हुन् । आगजनीबाट करणको गाउँको घरमा रहेका अन्नपात र लत्ताकपडा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । विद्यालयमा पढ्ने एक छात्राले दलित समुदायको केटासँग भागेर बिहे गरेपछि छात्राका आफन्तले शिक्षकको सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करणलाई निश्कासन गरेको थियो । गैरदलित...
गुल्मीमा कटुवाललाई तोकियो तलब
Sunday 24th of September 2017, 07:31 PM
गुल्मी । गुल्मीमा पहिलोपटक कटुवालको तलब तोकिएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले कटुवालको काम गर्दै आएकाहरुलाई तलब व्यवस्था गरेको हो । यससँगै कटुवालहरुले मगन्तेले जसरी घर-घरमा पुगेर अन्न संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले कटुवाललाई जनही ३६ सय रुपैयाँको दरले तलव तोक्ने निर्णय गरेको धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले जानकारी दिए । यो वर्ष धेरै रकम भए पनि तलव व्यवस्थाको सुरुवात मात्रै गरिएको र क्रमशः बृद्धि गरिदै जाने...
Sunday 24th of September 2017, 03:16 PM
हेटौँडा,८ असोज, राजपा नेपालका सहमहामन्त्री मिर्जा अल्साद बेग एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेका बेला आइबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमै बेग आफ्ना सहयोगी सहित एमाले प्रवेश गरेका हुन् । कपिलबस्तु निवासी बेगलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा स्वागत गरे । ओलीले मधेसमा एमालेको मत नघटेको तर सत्तापक्षको धाँधली र चार पार्टीको अघोषित गठबन्धनका कारण केही ठाउँमा प्राबिधिक रुपमा हारिएको बताए । ओलीले जनमतका...
Sunday 24th of September 2017, 11:00 AM
प्रहरी सहायक निरीक्षक...
सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस क्याम्प आठराई सक्रान्तीबजार तेह्रथुममा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक पूर्णबहादुर गुरुङ झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–१ घर भएका गुरुङ शनिबार राति आफ्नै घरको सिरान तलामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए । एकचालिस वर्षीय गुरुङ असोज ५ गते बिदामा घर गएका थिए । एक महिनाअघिमात्र सक्रान्तिबजार सरुवा भई...
फेसबुक मा चिनजान, बिहेपछि आयो यस्तो खतरनाक डरलाग्दो मोड
Sunday 24th of September 2017, 10:14 AM
फेसबुकमा चिनजान भएको भरमा वास्तविकता नै नबुझी एक युवकसँग बिहे गरेकी युवतीले बिहेलगत्तै ठूलो संकटको सामना गर्नुपरेको छ । बिहे गरेको एक महिनापछि ती युवतीले युवकको वास्तविकता थाहा पाएकी हुन् । वास्तविकता थाहा भएसँगै ती युवकले आफ्नी श्रीमतीलाई बन्धक बनाएर निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेका छन् । ती युवकले युवतीसँग आफू हिन्दू भएको बताएका थिए । भारतको जयपुरमा काम गर्ने अरमान खान नामका ती युवकले आफ्नो नाम अमन बताएका थिए । उनले सुरुमा ती युवतीलाई फेसबुकमा...
दशैं कसरी मनाउनु जमरा राख्ने अन्न र ठाउँ छैन
Sunday 24th of September 2017, 09:48 AM
बाँकेका बाढी पीडित दशैंको जमरा राख्ने अनाज र ठाउँ अभावमा पिरोलिएका छन् । राप्ती सोनारी-२ टिकुलीपुर क्षेत्रमा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन्, उनीहरु । आँगनमै दशैं भित्रिइसक्दा सबैले गच्छेअनुसारको किनमेल पनि नगरेका होइनन् । तर, आफ्नै घरमा बसेर चाडपर्वमा रमाउनुको विकल्प कसरी बन्न सक्थ्यो र, टहराको जिन्दगी ! टिकुलीपुर हरलाफाँटाको शिविरमा बस्दै आएकी ६० वर्षीया देवी खनाललाई दशैं आएजस्तो लागेकै छैन । भन्छिन्, ‘जीवनमा यति ठूलो कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने...
Sunday 24th of September 2017, 09:44 AM
जीप दुर्घटनामा एकको...
८ असोज, गुल्मी । गुल्मीमा शनिबार भएको जीप दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको छ । गुल्मीको भेडुवाबाट तम्घास आउँदै गरेको बा ११ च ८८०३ नम्बरको बलेरो जिप रेसुङ्गा नगरपालिका १३ स्थित भंगारी भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा एकजना घाइते भएका छन् । दूर्घटनामा परी रेसुंगा नगरपालिका ३ का ३६ वर्षीय बाबुराम पन्थीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक अनुराकुमार द्विवेदीले जानकारी दिए । दुर्घटनामा जीपका चालक इस्मा गाउँपालिका– २ का डम्बर...
प्रदेश २ को चुनावी परिणामबाट एमालेले बुझ्नु पर्ने तथ्य
Saturday 23rd of September 2017, 06:38 PM
तेस्रो चरणमा ठेलिएको प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनका अन्तिम परिणामहरु आइरहेका छन् । यो परिणामले न त कांग्रेसले दावी गरेजस्तो १०० सिट उसलाई दिएको छ, न त एमालेलाई नै उसको दावी जस्तो ७० सिट । कांग्रेसका निम्ति प्रदेश २ मा ठूलो दल बन्न सकेको सान्त्वना सम्म यो निर्वाचनले अवश्य दिएको छ । यद्यपि १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मा करिव ४० सिट जित्ने लक्षण देखाएको कांग्रेस प्रष्ट बहुमतभन्दा धेरै टाढा छ । प्रदेश २ को चुनावी परिणाम एमालेका निम्ति अनपेक्षित नै...